MWC2017 မှအခြား Nokia ရတနာများ - Nokia5နှင့် Nokia6| Androidsis
MWC2017 တွင်ရှိသောအခြား Nokia ရတနာများ - Nokia5နှင့် Nokia 6
ဟိုဆေး Alfocea | | UHI, NOTICIAS
ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress 2017 ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးသည့်လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေ နေ့မှစ၍ ကျွန်တော်တို့ကို Nokia အံ့သြသွားတယ် အဘယ်သူ၏အနာဂတ်, ယုတ္တိဗေဒ, မမြင်ရသေးသည်သည်သူ၏အံ့မခန်းပြန်လာနှင့်အတူလူတိုင်း။ သူမွေးဖွားခြင်းနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ် Nokia 3310 2017ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်လက်ခံခြင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း၊ မြွေကစားခြင်းနှင့်အခြားအရာများအတွက် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Nokia သည်အချိန်ကာလ၏အရောင်းရဆုံးနှင့်ကြမ်းတမ်းဆုံးသောဖုန်းများအား "remastering" အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါသူကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်မထားပါ။ ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများကိုလည်းဘဝပေးခဲ့သည်။
ကနေစ Nokia က 3ဈေးနှုန်းမှာ ၁၃၉.၀၀ ယူရိုရှိပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောမော်ဒယ်နှစ်မျိုးနှင့်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Nokia5နှင့် Nokia6တို့ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သူတို့ဟာချွေးသိပ်မများကြဘူး Nordic လောင်းကစားကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ပန်းသီးနှင့်နဂါးငွေ့တန်းများအားလုံးမဟုတ်ခဲ့သည့်အချိန်ကိုသတိရစေသည်.
1 Nokia ပြန်လည်မွေးဖွားမှုသည် Android နှင့်အတူတကွလက်တွဲနေသည်
1.1 Nokia က 5
1.2 Nokia က 6
Nokia ပြန်လည်မွေးဖွားမှုသည် Android နှင့်အတူတကွလက်တွဲနေသည်
တစ်ချိန်ကအငြင်းပွားဖွယ်ရာမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း၏ခေါင်းဆောင်ဖင်လန် Nokia သည်အပြောင်းအလဲနှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေရှိမည်ကိုမသိ ခဲ့၍ နောက်ဆုံး၌ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကိုရောင်းအားကျဆင်းသွားသော်လည်းထိပ်ဆုံးသို့တက်ခြင်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မြန်ဆန်စွာကျဆင်းသွားသော်လည်း၎င်းသည်ပုံရသည် Nokia သည်လက်ကိုင်ဖုန်းကဏ္fromမှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသို့ဘယ်တော့မှမထွက်တော့ပါနှင့်ယခုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Nokia 3310 2017 ကိုစိတ်ပျက်စေသော Melancholie နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Android စမတ်ဖုန်းသုံး အဘယ်သူ၏ nomenclature မြင့်တက်မှုလည်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်သည်, မော်ဒယ်များ၏စျေးအကြီးဆုံးတောင်မှစျေးကြီးလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးပေမယ့်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဤအဆင့်၏ဒုတိယနှင့်တတိယအဆင့်ဖြစ်သော Nokia5နှင့် Nokia6တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းအောက်ခြေတွင် Nokia 3
Nokia က 5
Nokia5စမတ်ဖုန်းသည် operating system ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာသည် Android7Nougat စင်ကြယ်သောပြည်နယ်အတွက်။ အဲဒါရှိတယ် ၅.၂ လက်မဖန်သားပြင်နှင့် HD resolution 5,2p ရှိ.
အတွင်းပိုင်း, Processor ကို Snapdragon 430 နှင့်အတူ (Nokia3ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်)2GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 16 GBသို့မဟုတ်၎င်းတွင်ရှိသည့် microSD ကဒ်အထိုင်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းတိုးချဲ့နိုင်သည်။
တစ်ဦးနှင့်အတူ 3.000 mAh ဘက်ထရီ, Nokia5သည်တစ်နေ့လုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကတိပေးထားသည်။
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ကင်မရာ 13 megapixel နှင့်ရှေ့ကင်မရာ 8 megapixel.
စျေးနှုန်းကတော့ ၁၈၉ ယူရိုဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကတော့ ၀ ယ်မှာဖြစ်ပါတယ် အရောင်လေးခု သုံးစွဲသူများနှင့်ကိုက်ညီရန်အပြာ၊ ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့်ကြေးနီတို့ဖြစ်သည်။
Nokia က 6
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးဖင်လန်စမတ်ဖုန်းမိသားစု၏နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော the Nokia က 6နောက်ထပ်သုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး၏ဈေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
Nokia6နဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေသိပ်မများပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့သူကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်မိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ တရားဝင်အနေဖြင့် ၂၂၉ ယူရိုဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် Old Continent သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည် အရာ, သငျသညျ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအနေဖြင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်, မှာအားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
Nokia6ကတော့ mid-range စမတ်ဖုန်း မျက်နှာနှင့်အတူ 5,5 လက်မ နှင့် resolution Full HD ကို 1080p တွင်ပြသထားသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Processor တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည် Snapdragon 430 Qualcomm ကအတူလိုက်ပါသွား 3GB RAM, GB အထိသိုလှောငျ 32 microSD ကဒ်ဖြင့်ကန့်သတ်ချက်များထည့်သွင်းနိုင်သည် 3.200 mAh ဘက်ထရီ။
Nokia သည် Premium ဗားရှင်းကိုအနက်ရောင်ဖြင့်ဖြန့်ချိပြီး4GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှုကိုယူရို ၃၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်။
Nokia 3, Nokia5နှင့် Nokia6စီးရီးစမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူဒဏ္icalာရီဖင်လန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်ကြက်ဥပေါက်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်တန်းစားအားအင်အားဖြင့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်များစွာသောလူအများစုအတွက်ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့်စနစ်နှင့်လက်ချင်းချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ ထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့အနှစ်သာရရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စျေးနှုန်းတွေပါတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပါ။
Nokia သည်၎င်း၏အတိတ်သမိုင်းကြောင်းအရ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီမည့်စျေးကွက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါ့မလား။ ယခုအချိန်နှင့်စားသုံးသူများသာနောက်ဆုံးစကားလုံးရရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » UHI » MWC2017 တွင်ရှိသောအခြား Nokia ရတနာများ - Nokia5နှင့် Nokia 6
Huawei Watch အသစ်ကို MWC 2017 တွင်တင်ပြခဲ့သည်
ZTE သည် MWC 8 တွင်စျေးသက်သာပြီး Blade V2017 Mini နှင့် Lite အသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်